Dhalada Daryeelka Shakhsiga ah, Dhalada dawooyinka ee Muraayadaha, Dhalada Glass - Hoyer
Waxaan haysannaa noocyo kala duwan oo dhalo tayo sare leh!
SAMPLES bilaash ah ayaa loo diri karaa baaris tayo leh!
Naqshad gaar ah ayaa la heli karaa!
Fadlan farriin noogu soo dir hadaad wax su'aal ah qabtid, waxaan kugu celin doonaa 8 saacadood gudahood.
Xirfadle ahaan iyo orodyahan hore ee warshadaha dhalada ee galaasiga ah, Hoyer Glass inta badan wuxuu ku hawlanaa baarista iyo horumarinta, qaabeynta, soosaarka, suuqgeynta iyo ganacsiga dhammaan noocyada wax soo saarka dhalada tayo sare leh.
Hadda, waxaan ka shaqeynaynaa taxane kala duwan oo maqaallo galaas ah oo kumanaan nooc ah, sida dhalada daryeelka shaqsiyeed, dhalada khamriga dhalada, weelka jikada, weelka dhalada, dhalada dawooyinka galaaska, dhalada cabitaanka galaaska iyo waxyaabaha kale ee la xiriira.